ट्रयाकिंग र अन्य सेल फोन जीपीएस सेवा
नयाँ र अर्को तिक्खर
कुन सेल फोन जीपीएस तपाईं को लागी गर्न सक्नुहुन्छ
धेरै सेलफोन जीपीएस क्षमतासँग आउँदछ। ठूलो मोबाइल फोन वाहकहरूको प्रत्येक प्रस्ताव GPS को सक्षम मोडेल प्रदान गर्दछ। उपभोक्ताको लागि, GPS ले फोनको स्थानमा आधारित सेवाहरूको संसार खोल्दछ, र यसले वास्तविक-समय सेलफोन ट्र्याकिङको संभावनालाई परिचय दिन्छ। हो, यो सेल फोन कानूनी रूपमा ट्रयाक गर्न सम्भव छ, तर विचार गर्नका लागि गोपनीयता र प्रयोगकर्ता अधिसूचना आवश्यकताहरू छन्।
स्थान आधारित सेवा
तपाईंको सेलफोन प्रयोग गरी तपाईको स्थानमा आधारित सेवाहरूको संख्या छिटो बढ्दै जान्छ। तिनीहरू तपाईंलाई सहयोग गर्छन्:
नेविगेट गर्नुहोस्, तपाई हिंड्नु हुन्छ वा ड्राइभिङ हुनुहुन्छ
वास्तविक समयमा नक्सामा तपाईंको स्थिति हेर्नुहोस्
वास्तविक समयमा साथी वा परिवारको स्थान हेर्नुहोस्
तपाईले पत्ता लगाउन र रेस्टुरेन्टहरू, पसलहरू र चासोका अन्य नजिकका बिन्दुहरू पत्ता लगाउन र मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्दछ
ट्र्याक, विश्लेषण, र कसरत डाटा भण्डार गर्नुहोस्
तपाईंको स्थानमा आधारित संग्रहालयमा सूचनाको रेकर्डिङ सुन्नुहोस्
यी सेवाहरू टच-स्क्रिन स्मार्टफोनहरूमा सजिलै उपलब्ध छन्, जस्तै आईफोन र एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम स्मार्टफोनहरू। तथापि, स्थान-आधारित सेवाहरू फोनको व्यापक दायरामा उपलब्ध भइरहेको छ, र यो प्रवृत्ति सम्भवत हुनेछ।
जीपीएस मार्फत सेल फोन ट्रैकिंग
सेल फोन ट्र्याक इनमा निर्मित जीपीएस चिप्स मार्फत धेरै रुचि छ। ट्रयाकिंग तीन कोटिमा पर्दछ, जसमा स्थान साझेदारी, स्वैच्छिक ट्र्याकिङ र गोप्य ट्र्याकिङ सहित।
स्थान-साझा ट्र्याकिंग। स्थान-साझेदारी सामाजिक मिडिया अनुप्रयोगहरू सामान्य-टच स्क्रीन स्मार्टफोनका लागि उपलब्ध छन्। यी अनुप्रयोगहरू, जस्तै एप्पल मेरो मित्र र ग्ल्याम्पस फेला पार्नुहोस्, तपाईंको वास्तविक समयको स्थानलाई तपाइँले चयन गर्नुभएको साथीहरूको समूहमा देखाउनुहोस्, वा तिनीहरू सार्वजनिक रूपमा प्रसारण गर्छन्। यी अनुप्रयोगहरूले तपाईंलाई साथी वा व्यापार सहयोगीहरूसँग सम्पर्क गर्न मद्दत गर्दछ तर हेरविचारको साथ प्रयोग गर्नु पर्छ, विशेष गरी सार्वजनिक पहुँच सुविधा। तपाईंले आफ्नो फोनमा वा वेब ब्राउजर मार्फत साथीहरूको स्थान हेर्न सक्नुहुन्छ।
स्वैच्छिक ट्र्याकिंग जीपीएस मार्फत सेल फोनको वास्तविक-समय ट्र्याकिङ एटी एन्ड टी परिवार मेप सेवा, वेरिजोनको परिवार लोकेटर र स्प्रिन्टको पारिवारिक लोकेटर सेवाको परिचयको साथ मुख्य स्ट्रीममा सारियो। यी सेवाहरूले ट्र्याक गरिएका फोन स्थानहरू वेब ब्राउजर वा मोबाईल फोन मार्फत पहुँचयोग्य नक्सामा देखाउँछन्। प्रयोगकर्ताहरूले अलर्टहरू सेट गर्न सक्छन् जब ट्रयाक गरिएको फोनले केहि स्थानहरूमा प्रवेश गर्दछ वा छोड्छ। उदाहरणका लागि बच्चाहरू घर वा खेलकुद अभ्यासमा आइपुग्दा स्वचालित सूचना प्रदान गर्न उपयोगी छ। यसको अतिरिक्त, सेल फोन स्थान राष्ट्रीय बढ़ाया 911 सेवा मा बनाइयो।
गुप्त ट्र्याकिंग व्यक्तिहरू द्वारा गुप्त सेल फोन ट्र्याकिङ कानुनी कानूनी होइन वा वाहकहरू द्वारा उपलब्ध छैन। सावधान रहनुहोस् यदि तपाई गोपनीय सेल फोन ट्र्याकिङ लागू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यस अभ्यासमा केन्द्रित संख्याहरू छन्।
सेलफोन जीपीएस हाम्रो जीवनको भाग हो, र जब राम्रो तरिकाले प्रयोग गरिन्छ, यसले आमाबाबु र प्रियजनहरूको लागि मूल्यवान सेवा प्रदान गर्दछ। कुनै पनि टेक्नोलोजीको रूपमा, गोपनीयताको आदर गर्न र व्यक्तिगत डेटा रिलीज गर्न व्यक्तिहरूलाई यसमा पहुँच नहुनु व्यक्तिहरूलाई छुटाउनको लागि हेरचाह गर्नुपर्छ।
बच्चाहरु संग भूगोल
6 उत्तम वर्चुअल मिसिन सफ्टवेयर कार्यक्रम
5 उत्तम गोल सेटिङ अनुप्रयोगहरूको
सेलफोन के हो?
कसरी इन्टरनेट ब्राउजिङले तपाईंको शरीरमा असर पार्छ
रेगस बिजनेसद्वारले के गर्दछ?
इन्टरनेट ब्राउजिङ साइकल तोड्दै
10 Scariest वर्चुअल रियलिटी गेम्स तपाईं अहिले खेल्न सक्नुहुन्छ
तर, उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेनन्।
AOL मेल SMTP सेटिङका ​​लागि निर्दिष्टीकरण
फायरफक्स पुनः निर्देशित वायरस हटाउन
कसरी एक्सेलमा ड्रप डाउन सूची सिर्जना / हटाउनुहोस्
एफएसबी फाइल के हो?
एक YouTube तारा बन्नुहोस्
ITunes Store को समीक्षा
VCF फाइल के हो?
पासकोड के हो?
"Mkdir" आदेशसँग लिनक्समा डाइरेक्टरीहरू कसरी सिर्जना गर्ने
ओएस एक्स मेल9- म्याक ई-मेल प्रोग्राम
Epson's Expression Premium XP-630 Small-In-One प्रिन्टर
WordPress.com "प्रीमियम अपग्रेड" के हो?
89को शुरुवात शुरुवात बिजुली गिटारहरू किन्नुहोस्
आईफोनको लागि अनुप्रयोग कसरी बनाउने?
WhatsApp बनाम स्काइप फ्री भ्वाइस कलहरू
तपाईंको TiVo MAK पत्ता लगाउँदै (मिडिया पहुँच कुञ्जी)
Craigslist के हो?
तपाईंको याहू मेल सम्पर्कमा प्रेषक वा प्रापक थप्नुहोस्
PowerPoint 2007 मा स्लाइड मास्टर्स
Badoo अनलाइन च्याट र डेटिङ एप: शुरुवातका लागि गाइड
कसरी एक Bootable Fedora USB ड्राइव सिर्जना गर्नुहोस्
2018 मा खरीद गर्न 8 बेस्ट सेन्टर च्यानल च्यानल